Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo kulan la qaatay Madaxda Galmudug “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo kulan la qaatay Madaxda Galmudug “SAWIRRO”
Garowe, July 13, 2015…..Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa galabta tagey magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, isagoo uga sii gudbay magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland, waxana mudadii koobnayd ee uu jooga Cadaado la kulmay hoggaanka Maamulka KMG ah ee Galmudug.
Ra’iisul wasaaraha ayaa Cadaado kula kulmay Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guulleed iyo ku xigeenkiisa Mudane Maxamed Xaashi Cabdi, wuxuna ugu hambalyeeyey doorashadooda, isagoo kula dar-daarmay in ay sii wadaan dib u heshiisiinta iyo raadinta nabadda si loo gaaro xasilooni Siyaasadeed oo deegaanka ka hana qaado.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid iyo Madaxweynaha Galmudug Mudane C/kariin Xuseen Guulleed oo saxaafadda kula hadlay Madaxtooyada Cadaado, ayaa sheegay in ujeedka Cadaado usoo gaaray R/Wasaare Cumar ay tahay sidii ay u kala warqaadan lahaayeen dowladda dhexe iyo Maamulka Galmudug.
“Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Cadaado ee lagu doortay Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. Waxaan sii wadi doonaa dhiiri gelinta iyo taageerada Maamulka KMG ah ee Galmudug. Xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay qeyb ka qaadatodhamaystirka maamulkan oo ah mid bilow u ah horumar waara oo laga gaaro dhibaatooyinkii deegaanka ka jiray” ayuu yiri R/wasaare Cumar.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga sii gudbay Cadaado, Magaalada Garowe ee xarunta Puntland halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono hoggaanka Maamulka Puntland iyo qaybaha bulshada.
Maxamuud Cabdi Diirshe
Wasaaradda caafimaadka oo deeq dawo ah ku wareejisay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe-Sawirro
Madaxda Qaranka oo ka tacsiyadeysay geerida Marxuum Xaaji Shukri